‘४०’ बर्षिया महिलाको – पीडादायी कथा – म अझै कुमारी नै छु!
मेरो बिहेको रात थियो। पहिलो पटक म एउटा पुरूषसँग नजिक हुँदै थिएँ। मेरा एकदमै मिल्ने साथीहरूसँग गरेका कुराकानी सम्झिँदै मेरो दिमागमा सपना र चाहनाका अनेकौँ तस्वीरहरु घुमिरहेका थिए। म हातमा एक गिलास दूध लिइ टाउको निहुराएर कोठामा प्रवेश गरेँ।
मैले धेरै केटा र केटीहरू सम्झनलायक गहिरो मित्रतामा परेको देखेँ। उनीहरू एकअर्काको काँधमा टाउको राखेर बस्थे, एकअर्काको हात समाएर हिँड्थे र मैले डाह गर्थेँ
म ३५ वर्षकी थिएँ र मसँग शा रीरिक स म्पर्क गरेको अनुभव थिएन। त्यो अस्वीकार्यता एकदमै पीडादायी थियो। कलेजको बेला र काम गर्दा मैले धेरै केटा र केटीहरू सम्झनलायक गहिरो मित्रतामा परेको देखेँ। उनीहरू एकअर्काको काँधमा टाउको राखेर बस्थे, एकअर्काको हात समाएर हिँड्थे र मैले डाह गर्थेँ।
मेरो मुटु प्रेम र चाहनाका लागि जलिरहन्थ्यो। तर म एक्लोपनले घेरिएकी थिएँ। बेला–बेला मलाई लाग्थ्यो कि म मोटी भएकीले यस्तो भएको हो। के पुरूषहरू मोटी महिलालाई घृ णा गर्छन् ? के मेरो तौल नै मैले विवाहका लागि उपयुक्त केटा नपाउनुको कारण हो ? के म साँच्चै नै जीवनभर एक्लै रहनुपर्छ ? के म सधैँ कुमारी नै रहन्छु ? यस्ता प्रश्नहरू हरबखत मेरो दिमागमा खेलिरहन्थे।
मैले भोलिपल्ट सोधेँ, उनले भने– मलाई सञ्चो भएन। तर केही पनि परिवर्तन भएन। हाम्रो दोस्रो, तेस्रो र कैयौँ रातहरू त्यस्तै रहे।
अन्ततः जब म ३५ वर्षकी भएँ। कसैगरी ४० को दशकका एक पुरूष विवाह गर्न आए। हाम्रो कुरा छिन्ने बेलामा मैले मेरा भावना उनीसँग व्यक्त गरे। तर उनले न ध्यान दिए न त जवाफ। उनी अत्तालिएको जस्तो लाग्यो। भुइँतिर निहुरिएर उनी चुपचाप बसिरहे, टाउको पनि खासै माथि उठाएनन्।
मैले सोचेँ पुरूषहरू अचेल महिलाभन्दा बढी लजाउन थालेका छन् र मेरा हुनेवाला पति पनि अपवाद रहेनछन्। तर बिहेको रात म अलमलमा परेँ। मलाई थाहा छैन उनले किन त्यस्तो व्यवहार देखाए। जब मैले भोलिपल्ट सोधेँ, उनले भने– मलाई सञ्चो भएन। तर केही पनि परिवर्तन भएन। हाम्रो दोस्रो, तेस्रो र कैयौँ रातहरू त्यस्तै रहे।
मैलै मेरी सासूलाई त्यो कुरा भनेँ तर उनले आफ्नो छोराकै बचाउ गरिन्। ऊ एक लजालु केटा हो जो बच्चैदेखि केटीहरूसँग कुरा गर्न धक मान्थ्यो, ऊ केटाहरू पढ्ने विद्यालयमा पढ्यो र उसकी दिदीबहिनी पनि छैनन् न त विपरीत लि ङ्गको कोही साथी नै छ। त्यो स्पष्टीकरणले मलाई तत्कालका लागि केही राहतको अनुभुति दिलायो। तर मैले त्यसबारे सोच्ने क्रम रोक्न सकिनँ।
“तपाईँलाई म मन पर्दिनँ हो ? हामी एक पटक पनि नजिक भएका छैनौँ, तपाईँले आफ्ना भावनाहरू शब्दमा पनि व्यक्त गर्नुभएन। तपाईँको समस्या के हो ?
के मेरो मोटोपन नै उनको त्यस्तो व्यवहारको कारण थियो ? के दबाबमा परेर उनले मसँग बिहे गरेका थिए ? मलाई आफ्नो पी डा कसलाई सुनाऊँ थाहा थिएन। मेरो आफ्नो परिवार म नयाँ जीवनसँग खुशी थिएँ भन्ने भ्रममा थियो। तर मेरो धैर्यको बाँध टुटिरहेको थियो र मलाई एउटा समाधान चाहिएको थियो।
म उनको नजिक गएँ र आदरपूर्वक सोधेँ, “तपाईँलाई म मन पर्दिनँ हो ? हामी एक पटक पनि नजिक भएका छैनौँ, तपाईँले आफ्ना भावनाहरू शब्दमा पनि व्यक्त गर्नुभएन। तपाईँको समस्या के हो ?
उनले जवाफ दिए, मलाई कुनै समस्या छैन।”
उनले के पनि भने भन्दा मैलै उनको ध्यान तान्नुपर्छ र त्यसो गरेर उनको नजिक हुनुपर्छ। मैले निकै आँट गरेँ । मेलै कल्पना गरेकी थिएँ कि मेरो स्पर्शले परिणाम दिनेछ तर म निराश भएँ। मलाई थाहा थिएन र यसबारे कसलाई सोध्ने ? मलाई एकदमै लाज लाग्यो। त्यसले मलाई सतायो। जसरी महिलाको सुन्दरताबारे पुरूषहरू धारणा बनाउँछन्, मैले मेरा पतिको शरीर हेरेर धारणा बनाउन किन मिल्दैन ? मैले पतिबाट अपेक्षा गर्नु गलत थियो र ? त्यसपछि मलाई थाहा भयो कि उनी नपुं सक थिए र हाम्रो बिहेभन्दा पहिले डाक्टरले उनी नपुं सक भएको पुष्टि गरिसकेका थिए।
तिमीलाई जे मन लाग्छ गर। जोसँग सुत्न चाहन्छौँ सुत। म तिमीलाई केही भन्दिनँ अथवा कसैलाई यो कुरा भन्दिनँ। कसैसँगको सम्पर्कबाट बच्चा भए उसलाई म आफ्नो नाम दिन तयार छु।
उनी र उनका परिवारलाई सबै थाहा थियो। तर मलाई थाहा नदिएर उनीहरूले मलाई धो का दिएका थिए। मैले थाहा पाएपछि उनलाई लज्जा महसुस भयो। यद्यपि उनले माफी मागेनन्। एकजना महिलाले गर्ने सानो गल्तीलाई पनि समाजले बढाइचढाइ गर्छ। पुरूषको गल्ती हुँदा पनि महिलातिर औंला तेर्स्याइन्छ।
तर मेरा पतिका शब्दहरूले सबैभन्दा बढी मलाई चो ट पुर्याए। उनले भने, तिमीलाई जे मन लाग्छ गर। जोसँग सुत्न चाहन्छौँ सुत। म तिमीलाई केही भन्दिनँ अथवा कसैलाई यो कुरा भन्दिनँ। कसैसँगको सम्पर्कबाट बच्चा भए उसलाई म आफ्नो नाम दिन तयार छु। यस्ता कुरा कुनै पनि पत्नीले आफ्ना पतिबाट सुन्न नपरोस्। उनी धोके-बाज थिए र उनले आफ्नो र परिवारको प्रतिष्ठताका लागि मलाई त्यस्तो गर्न भनिरहेका थिए।
म अहिले ४० वर्षकी भएँ र म अझै कुमारी छु। विगतमा मसँग नजिक हुन धेरै पुरूषहरूले प्रयास पनि गरे। उनीहरूले के लख काटे भने शा रीरिक सन्तुष्टि नपाएरै मैले आफ्ना पतिलाई छाडेकी हुँ
१ वर्ष अगाडी बिबिसी हिन्दीमा प्रकाशित लेखबाट अनुवाद गरिएको
२०७८ भाद्र ३, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 194 Views